एफवान सफ्टले निम्त्याएको विश्वासको संकट : त्रासमा बैंकिङ क्षेत्र – SunkoshiNews
के भएको थियो :
यसमध्ये एफवान सफ्टले बैंकहरुको अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमको काम गर्छ । इसेवाले भुक्तानी सेवा प्रदायक ९पीएसपी० को सर्भिस हेर्छ भने सिरान टेक्नोलोजीले अनलाइन वा वेभसाइटहरुको डिजाइन, डेभलपमेन्ट र सपोर्टको काम गर्छ ।
कहाँ चुक्यो एफवान सफ्ट :
एफवान सफ्टप्रति दुई शंका :
अर्को, चिन्ता भनेको व्यक्तिगत गोपनियताको हो । मानिसले कतिपय व्यक्तिगत सूचनाहरु समेत कानूनी प्रयोजनका लागि बैंकिङ क्षेत्र वा पेमेन्ट सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्छ । यस्ता सूचनाहरुलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत गोपनियता हनन गर्ने अर्को सम्भावना समेत देख्न सकिन्छ । डार्कनेट जस्ता सफ्टवेयरहरुमार्फत् अहिले त्यस्ता सूचनाहरुको अनधिकृत रुपमा खरिदबिक्री भइरहन्छ । यस्तो सूचनालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नसक्ने समेत विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तोमा फस्ने अवस्था नहोस् भन्ने चासो हो ।
यतिखेर भेन्डर कम्पनीप्रति नै विश्वासको संकट देखिएको छ । तर, यस्तो अविश्वास हुँदा अनलाइन सिस्टम चल्न सक्छ त ? आईटी विज्ञहरु यसको कुनै सम्भावना देख्दैनन् । किनकी एफवानसफ्टजस्ता सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसँग बैंकहरुको भित्रि सूचना प्राप्त गर्नसक्ने पहुँच हुन्छ, हुनैपर्छ ।
बैंकरहरु पनि तनावमा :
‘हाम्रो देशमा अनलाइन कारोबार प्रणाली अझैपनि प्रारम्भिक चरणमा छ, यस्तो अवस्थामा यस्ता समाचार आउनु आफैंमा राम्रो थिएन । भोलि ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न छाडे भने के गर्ने ? एउटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘हामीलाई एफवानसफ्टको सिस्टम प्रयोग गर्दैनौं, अर्को चाहियो भन्न थाले भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छौं ।’
(मिति ः २०७६ चैत २२ गतेको रातोपाटी डटकमबाट साभार)